सदस्य सचिवका उम्मेदवारमा बहालवाला कर्मचारी देखि पलायनवादीसम्म « KhelkudNews.com
सदस्य सचिवका उम्मेदवारमा बहालवाला कर्मचारी देखि पलायनवादीसम्म
Published On : 21 July, 2020 9:10 am
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा सदस्य सचिवका लागि उम्मेदवारी दिने २७ जनाको नाम हेर्दा आश्चर्य लाग्दो छ । कर्मचारीले समेत राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसरी दर्ता गराउनेमा सानु राजा केसी र शिवराज भट्ट रहेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने नाम मध्य ह्यान्डबलका अध्यक्ष तेज गुरुङ लामो समय विदेश पलायन भएका थिए । उनी समानका अन्य सबै राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत रहँदा उनी भने जापान पलायन भएका थिए । उनकै बारे एक प्रशिक्षकको मत यस्तो छ । “ राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै एनआइएस कोर्स गरेका थियौ । हामी खेलका लागि समर्पित भयौ । उनी बिदेसिए । त्यही पैसाको आडमा योग्य ठहरिएर उनी हामीलाई कसरी शासन गर्न सक्छन् ? ”
त्यसो नेपाली खेलकुदमा पैसाकै आडमा कोही पनि ठुलो हुने प्रचलन पुरानो होइन । परन्तु ह्यान्डबल खेलमा तेज गुरुङको अस्थिर शैली र फाइदाका लागि तत्काल सम्झौता गर्न पछि नपर्ने उनको आदतबाट सबै जानकार छन् । २०६३ मा तत्कालीन ह्यान्डबल सङ्घको निस्क्रीयताको फाइदा उठाउँदै ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको आडमा उनी सङ्घ अध्यक्ष भएका थिए ।
लामो समय बिदेसिएर आए पछि त्यसको आडमा अध्यक्ष भएको उनको बानीले सबैलाई अचम्ममा पार्ने गरेको छ । लामो समय ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन हुँदा तेज गुरुङको भूमिका दुवै पक्षका लागि सन्देहास्पद रहेको थियो । राजनीतिक रूपमा पनि उनी अस्थिर व्यक्तिका परिचित छन् ।
सुरुमा राजनीतिको मतलब छैन भन्ने हवाला दिने तेज गुरुङ जापान पलायन बाट पैसा कमाएर फर्किए । यसको लगत्तै उनी पोखराका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भए ।
कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका उनी भुपु खेलाडी मञ्चको गतिविधिमा सक्रिय भए । पञ्चायत कालमा सत्ताको ताबेदारी गर्ने गरेका गुरुङ सन् १९९० पछि लगत्तै पलायन हुनुले पनि पूर्व सत्ताका निकट पात्र भएको प्रस्ट हुने ह्यान्डबल निकटले बताउँछन् । पोखराका खेलकुद निकट श्रोतका अनुसार भुपु खेलाडी मञ्चमा रहे पछि गुरुङमा राजनीतिको भोक पलाएको थियो । साथै सत्ता लाभको मोह पनि । जीवनराम श्रेष्ठसँग निकट हुँदै तदर्थ कमिटीको रूपमा उनी ह्यान्डबलमा प्रवेश गरेका थिए ।
फाइदाको निम्ति रङ्ग फेर्ने तेज कास्की एमालेमा फाइदाका निम्ति ओली समूहसँग निकट रहको मानिन्छ । परन्तु सो समूहले नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको गत नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा श्रेष्ठ पक्षधर रहेका थिए । उनको बारेमा एउटा मत सबैको छ,“प्रशिक्षकको जिम्मेवारी छाडेर पैसाका लागि बिदेसिनेले सदस्य सचिव पद पाउँदा पैसाको लागि के गर्ने होलान् ? ”